Natural Probiotic: Chikafu Chinopa Hutachiona Hwakanaka | Kudya kweNutri
Iwe unofanirwa kuvandudza kugaya kwako? Kutora mapurobioti echisikigo kunogona kukubatsira kuti uite izvi nekuti zvinofungidzirwa dzorera hutachiona hwehutachiona mumatumbu.
Tsvaga kuti ndeapi mamwe mabhenefiti akanangana neaya anotaurwa zvakanyanya nezve microorganisms, zvakare izvo zvekudya izvo zvaunogona kuzviwedzera zvakasarudzika pakudya kwako.
1 Chii chinonzi probiotic?
2 Izvo zvakafanana nema prebiotic here
2.1 Vanoshanda here?
3 Maitiro ekuwana epanyama probiotic
4 Nezve probiotic inowedzera
Chii chinonzi probiotic?
Kuti utsanangure kuti chii chinonzi probiotic, kuvepo kwemabhakitiriya akanaka uye akaipa mune zvakasikwa kutanga kwakanaka. Probiotic ndeyeboka rekutanga. Izvo ndezve microorganisms inobatsira inogara mumuviri uye vaizoita basa rakakosha muhutano hwese.
Probiotic inoderedza huwandu hwehutachiona hwakaipa. Nenzira iyi, kubatsira kuchengetedza hutano hwakanaka hwehutachiona mumatumbu. Uye zvakare, aya mabhakitiriya nembiriso zvave zvichisanganiswa nezvimwe zvakawanda zvehutano zvinobatsira. Vamwe vanhu vanovatora ku:
Bata manyoka, kuzvimbirwa, uye gasi. Ivo anowanzo shandiswa pamwe nemishonga inorwisa mabhakitiriya kurwisa yavo mhedzisiro pane zvakajairika mashandiro ematumbo.
Bata zviratidzo zve ulcerative colitis kana inoshatisa ura syndrome
Simbisa immune system
Deredza kusagadzikana kwelactose
Kuvandudza kushanda kwehuropi
Dzivirira kubva kuzvirwere zvehutachiona
Bvisa zviratidzo zve eczema kana psoriasis
Bvisa zviratidzo zvekusingaperi kuneta chirwere
Kurudzira hutano huzhinji
Izvo zvakafanana nema prebiotic here
Kwete, uye zvakafanira kwete kuvhiringidza ivo nema prebiotic. Kusiyana nemaprobiotic, prebiotic haachengeti mabhakitiriya mhenyu. Pane kudaro, izvo prebiotic chikafu chinoita ndechekupa akateedzana ezvigadzirwa kune akanaka mabhakitiriya atove mumatumbu ako kuti agone kukura. Asparagus, oats, uye nyemba ndezve prebiotic chikafu.
Kune vanhu vazhinji vanozviti vakaona kuvandudzwa kwehutano hwavo (kunyanya mudumbu) mushure mekutora mapurobioti. Asi kune zvakare yakawanda nhamba yevaongorori avo, kunyangwe vachiziva zvimwe zvakanakira, vanotenda izvozvo zvimwe zvidzidzo zvichiri kudikanwa zvine chekuita nezvakanakira izvo zvinoenderana nazvo. Kune rimwe divi, zvakakosha kuti uzive kuti kune mhando dzakawanda dzeprobiotiki. Maitiro ayo pamuviri akasiyana zvichienderana nerudzi rweprobiotic iri mubvunzo.
Maitiro ekuwana epanyama probiotic
Unogona kuwana mapurobioti kuburikidza nezvikafu zvakaviriswa. Yogurts ndiyo inonyanya kufarirwa sosi yeprobiotic echisikigo. Ivo vanorayirwa kuti vasimbise mapfupa. Uye iyo yakaderera-mafuta uye yakaderera-shuga vhezheni inowanzo kuverengerwa muhuremu hwehurongwa, kunyanya kwemasikati kana chikafu.
Asi nepo zvimwe ichinyanya kuwanikwa, iyo yogati haisiriyo yega chikafu cheprobiotic. Kune zvimwe zvakanaka manyuko epurobioti edhayeti yako akakosha kufunga nezvayo:
Kefir: Inofungidzirwa seimwe yezvakanakisa sosi yeprobiotiki, kefir mukaka wakanwiwa unonwiwa kuCaucasus. Iyo yakagadzirirwa nekuwedzera kefir nodules kumukaka wemombe kana wembudzi. Kazhinji inoregererwa nevanhu vane lactose kusagadzikana, asi kana iwe uchida kuita pasina mukaka, dzimwe nzira dzakadai semvura kefir dzakakosha kuratidza. Iwe unogona kuzviita iwe pamba kana kutenga yakagadzirira-yakagadzirwa kefir kuchitoro.
Sauerkraut: Iyo yakaviriswa kabichi. Korean kimchi chimwe chikafu cheprobiotic chakagadzirwa nechikafu ichi (pakati pemimwe miriwo).
Miso: Iyo pasita yekuJapan inogadzirwa nezviyo zvakasiyana siyana zvakaviriswa. Yakabatana nezvakakosha zvehutano mabhenefiti, inoshandiswa zvakanyanya mune miso soup.
Dzimwe chizi: Mozzarella, cheddar, kottage, gouda ... Pasinei nekubatsira kwayo, chizi inofanira kugara ichidyiwa zvine mwero.
Yakabikwa magaka: Kuti vagadzire maitiro eprobiotic, iwo anofanira kunge akagadzirwa asina vhiniga.
tempeh: Iyo yakajairika Indonesian yakaviriswa soya. Mune imwe nzvimbo yepasi rose chave chikafu chakakosheswa zvakanyanya nehupfumi hwayo mupuroteni, kunyanya nevanhu vanotevedzera kudya kwezvinomera.
Probiotic inogona kuve nemimwe mhedzisiro, kazhinji idiki. Mune zvimwe zviitiko vanogona kuburitsa gasi rakapfava uye kuzvimba. Kana vakakukanganisa nenzira iyi, edza kudzikisa huwandu.
Nezve probiotic inowedzera
Kune nzira dzakawanda dzekuwana mapurobioti kuburikidza nekudya, asi zvinokwanisika kupa mapurobioti kumuviri kuburikidza nezvikafu zvinowedzera. Mu capsule, poda, kana fomu yemvura, zvinowedzera zvinoita kuti uwane maprobiotic ave nyore. Nekudaro, ivo havazi panguva imwechete yezvikafu sezvikafu zveprobiotic.
Chekupedzisira, sekune zvakawanda zvinowedzera, kuzvitora kunogona kunge kusiri kukuchengetedza. Usati watanga kutora probiotic kana zvinowedzera zvemhando ipi neipi, zvinokurudzirwa kubvunza chiremba, kunyanya kune vakadzi vane nhumbu kana vanoyamwisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kudya kweNutri » Nutrition » Maitiro eprobiotic echisikigo
Aluminium uye hutano
Kurera huremu kunodedera